यस्ता व्यक्तिसँग हुन्छिन् माता लक्ष्मी क्रोधित, कहिल्यै हुँदैन धनको बास ! – Nayabook
यस्ता व्यक्तिसँग हुन्छिन् माता लक्ष्मी क्रोधित, कहिल्यै हुँदैन धनको बास !
काठमाडौँ । आफ्नो जीवनमा सबैले चाहान्छन् की धन वैभव एश्वर्य र सम्पन्नता की देवी माता लक्ष्मीको आर्शीवाद सँधै बनिरहोस् । र जीवनमा कहिले पनि आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्नुनपरोस् । सबैले माता लक्ष्मीलाई खुशी पार्न धेरै प्रयास गर्दछन्, तर हामी अन्जानमै केही यस्ता गल्तीहरु गर्छौं कि माता लक्ष्मी रिसाउछिन् र भाग्य खस्किन थाल्छ। माता लक्ष्मी रिसाउनाले तपाईले जीवनमा धेरै समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
उसोभए आउनुहोस् हामी ती गल्तीहरुको__ बारेमा जानौँ जसले देवी लक्ष्मीलाई रिसाउन मा बाध्य गराउँछ ।
महिलाले भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम
घरका महिलाहरूलाई माता लक्ष्मीको रूपमा हेरिन्छ र उनीहरूले सरसफाइको विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ। प्रायस् यस्तो देखिन्छ कि हतारमा महिलाहरूले ननुहाईकन भान्सामा खाना पकाउन सुरु गर्दछन्। यदि तपाई पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने यस गल्तीलाई सुर्धानुहोस् । यो मान्यता छ कि जुन घरमा महिलाले जुन घरमा ननुहाईकन काम गर्ने गर्दछन् त्यो घरमा कहिल्यै पनि सुख समृद्धि हुने गर्दैन ।
धन वृद्धि भएपछि अवश्य गर्नुहोस् यी काम, नत्र हुनेछ नाश
नयाँ प्रेम पाए पुरानोलाई भूल्न समय लगाउँदैनन् यी राशिका युवती, छिट्टै…
केही व्यक्तिहरुको बानी यस्तो हुन्छ कि उनीहरु एक अर्का संग लडने र अपशब्द कुरा बोल्ने बानी गर्दछन् । यस्ता व्यक्तिसँग माता लक्ष्इमी सँधै क्रोधित हुन्छिन्। त्यसकारण हामी सबैले आफ्नो रिस र भावनालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ र हतारमा कसैलाई नराम्रो काम वा कुरा गर्नु हुँदैन।
अतिथीको सम्मान गर्न नभुन्नुहोला
केही मानिसहरूको यस्तो बानी हुन्छ कि पाहुनाहरू घरमन आउने बित्तिकै नाक र मुख कुच्याउन थाल्छन् । हिन्दू धर्ममा पाहुनाहरुलाई देवताहरुको दर्जा दिइएको छ र भनिन्छ कि देवताहरु हाम्रो घरमा पाहुना भएर आउँछन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू आउँदा अनुहार निन्याउरो बनाउनु राम्रो कुरा होइन। हामीले अतिथिहरूलाई पूर्ण सम्मानका साथ स्वागत गर्नुपर्दछ र यदि सम्भव भएमा केही उपहार लिएर पठाउँनुहोस्। यो विश्वास गरिन्छ कि यो गरेमा लक्ष्मी तपाईं संग धेरै खुसी हुन्छिन्।
साँझको समयमा यो काम गर्नु
साँझमा, यो विश्वास गरिन्छ कि पति र पत्नीले काफी संयमका साथमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। सूर्यास्त को समयमा वा साँझमा एक महिला र पुरुषले शारीरिक सम्बन्ध गर्नु राम्रो मानदिैन । यस्तो गल्ती गर्ने व्यक्तिसँग माता लक्ष्मी सँधै अप्रशन्न हुने गर्दछिन् । जसले घरमा गरिबी फैलाउने काम गर्दछ ।
अरुलाई सहयोग नगर्नु
केही व्यक्तिहरूको बानी हुन्छ कि तिनीहरूले ठुलो ठुलो कुरा गर्छन्, तर जब अरूलाई सहयोग गर्ने कुरा आउँछ, तिनीहरू पछाडि सर्दछन् । माता लक्ष्मी त्यस्ता व्यक्तिसँग रिसाउनुहुन्छ। मानवताको कर्तव्य सबै मानिसहरुका लागि सबैभन्दा माथि हुने गर्दछ । जसले यो कर्तव्य पालना गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई माता लक्ष्मीले मन पराउँदिनन् ।